Indlela yokuba yintando yamadoda, iingcebiso. Indlela yokuba ngumfazi othandekayo nomfazi oyifunayo, umfazi
Ibhinqa elingenalo uthando, njengelindili elingenaye ilanga: kungekudala okanye kamva, alibonakali ngokupheleleyo. Uthando olusinika lona, ​​abafazi, abanamandla angapheliyo, abaphefumlelayo, abaphefumlelayo kwaye abenzele amahle. Ngokuqinisekileyo, uguqula abantu kwaye wenza ngcono. Kodwa kungenxa yesiqingatha esihle sabantu esithandayo ngenye yezidingo ezisisiseko ezibangelwa ulonwabo. Kule nqaku, siya kuzama ukufumana indlela yokuba ngumntu othandekayo, ongenakunqandwa kwaye oyifunayo kwisiqingatha sesibini.
Ndiyamthanda, kwaye ngoko, ndihlala!
Lo mgca ovela kwi-V.Vysotsky imbongo eyaziwayo ngokucacileyo ibonisa ukubaluleka kobubele bothando kubomi babo bonke abafazi. Kude kakhulu, kodwa kunokwaneleyo ukubonisa isizathu esibalulekileyo sokuba sonke sizame ukuthanda.
Inyaniso kukuba ngenxa yeemeko ezithile zengqondo umntu uvele uzive njengomntu odibeneyo kwaye ovisisanayo, xa ebomini bakhe kukho omnye umntu othanda ngokunyanisekileyo aze amkele. Njengomntwana, le nxaxheba yenziwa ngumama, nakwimpilo yabantu abadala. Ngokuqinisekileyo, unokuthi umntu ngokwakhe ngumntu olungiselelwe, kwaye akafunanga nayiphi na eyongezelelweyo, kodwa oku akunjalo ngokupheleleyo. Sonke sidinga ukhuseleko, udumo, ukunyaniseka, ukunakekelwa kunye nokuqwalaselwa, okungafunyanwa ngokupheleleyo komnye umntu. Kwaye oku kukubonakaliswa okubalulekileyo kothando-unobumbano obuninzi kunye nokwamkelwa ngokupheleleyo.
Ndifuna ukuthandwa kwaye kufuneke!
Ukuba kwakukho imithetho yamathambo ebomini bethu, kuya kuba nokwanele ukufumana i-wand magic okanye ukucela iNhlanzi yeGolide kunye ne-voila - "ukuthandana ethuneni" kuyaqinisekiswa kuwe! Kodwa, hayi, inyaniso yethu ikude nehlabathi lezondlo kwaye kule nto kubalulekile ukufezekisa yonke into ngokuzimela. Kubandakanya ukuthanda omnye. Kuphela kwimbali yamagama kunye neenomfa zowesifazane azibona Yena, amehlo abo adibana kunye kunye nothando olungathandabuzekiyo lwavutha phakathi kwabo. Amadoda anamhlanje, ukuba awathatha amehlo abo kwi-smartphone okanye ithebhulethi yabo, banokuthi "bahlangabezane nelihlo" ngentamo yakho, kwaye bangaboni "ihlabathi elingaphakathi." Ngokuqinisekileyo, unokuqhubeka ukholelwa ukuba kwenye indawo kukho i-romantics yangempela kunye neenkosana. Kodwa ulinde kude kube yinto enobungozi obuvela kwiNcwadi eBomvu ikufumanisa kwaye uyonwabe uthando lwakho, sisisidenge! Okokuqala, ukhuphiswano lwaba "bulumko nabahle" luphezulu kakhulu. Okwesibini, kunokuthabatha ixesha elininzi kangangokuba igama elithi "engcwabeni" liya kuba linyani. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuthandwa novuyo ngoku, kwaye kungekho kanye apho, zithathele iimeko ezandleni zakho!
Indlela yokuba ngumfazi othandekayo nomfazi oyifunayo?
Ngoko sifika kumbuzo obaluleke kakhulu, ukubandezela abasetyhini emhlabeni wonke, indlela yokuthandwa kunye nokufunwa. Yenza ngokukhawuleza ukuba awuyi kuthandana ngokunyanisekileyo, kwaye awukwazi ukwakha ulonwabo kwintlungu yomnye. Ezi zithethe zabantu zizele ubulumko behlabathi kwaye zisekelwe kwiimeko ezibuhlungu zokhokho bethu. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuthandwa ngokwenene, uthanda kwaye uyonwabile, ke ushiye zonke iinzame zokupota nokutsala indoda ngaphandle kwentsapho. Ukuba umntu akhululekile okanye akanakukhathalela ngokupheleleyo, akusiyo indoda yakho. Akunakukuvuyisa, kungakhathaliseki ukuba ufuna kangakanani.
Kuyinto enye into ukuba nonke nisenkululeko kwaye nilungile komnye nomnye, kodwa ihlala isibhengezo sothando. Kwiimeko ezinjalo, kunokwenzeka, kwaye ngamanye amaxesha kuyimfuneko, ukuthatha inyathelo kwiintsebenziswano. Yenza nje ngobumnene nangenene. Kungenxa yokuba amadoda amaninzi, njengamahashe asendle, kuphela evelile "umkhonto" wobudlelwane obunzulu, ngokukhawuleza ukugijima, intloko entloko. Ngako oko, ukuba udibanise i-"Mustang" yakho kufuneka uyibeke ngobumnene, ngokukhawuleza.
Okokuqala, yenza iintlanganiso zakho zibe yithuba elihle kakhulu lusuku. Akunzima kangangoko kunokuba kubonakale kukujonga kuqala:
zizungeze intanda yakho ngenyameko kunye nenyameko, ube nomdla kwimicimbi yakhe kunye neengxaki, wenze izinto ezimangalisayo kunye nezipho.
akaze anqabe ukwabelana ngokuphumla, nangona ukuba unikela ngephulo lebhola okanye ukuxhoma kunye nabahlobo bakhe. Ukuvumelanisa, ubonisa umntu ukuba unomdla kuwe, kwaye izinto zakhe zokuzilibazisa zibalulekile kuwe. Nceda, nceda wenze ngokunyanisekileyo kwaye ungadlala ngokwaneleyo!
hlonela intsapho yakho kunye nabahlobo, nangona ukuba akukuhle kakhulu kuwe. Mhlawumbi, ngelixa ungabazi kakuhle. Banike ithuba.
Kodwa okubaluleke kakhulu - musa ukwenza umntu wepropati yakhe. Ungazami ukulawula konke ukuhamba kunye nemibuzo engapheli kunye neefowuni. Ukuba wenza konke okulungileyo, uya kukuxelela malunga nokuba wayephi kunye noko wakwenzayo emini. Ungabi nomona ekuqalekeni kwaye ungasebenzisi - kuyabangela ukuxhatshazwa ngesondo esomeleleyo. Ukuba unomdla malunga nonobhala wakhe omtsha, uzama ukuthetha naye ngokuzithelekileyo malunga nayo, ngaphandle kokuqhaqhazela. Funda ukuzithemba intanda yakho kunye nomfazi onommangaliso onjengawe, akayi kuhamba kwenye!
Indlela yokuba ngumfazi othandekayo?
Hayi, kwenzeka ukuba xa wesazi ummangaliso omkhulu wokuthandana, ekugqibeleni abantu bayawulahleka. Ubomi, iingxaki, ukungabikho kwemali, umsebenzi ongunaphakade, abantwana ... Konke oku kutshabalalisa uthando ngobudlelwane. Yaye kunye nayo iyalala kunye nomnqweno wokuba sisondele, ukuthokoza kunye nokunyamekela, ukunakekelwa. Ngethamsanqa, ukuba uthando lwabantu abatshatileyo luyinyani, ngoko kulula ukuyivuselela.
Kwaye kufuneka uqale ngeembulelo zothando. Imemori yethu ihlukile! Kwaye nangona kubonakala kuwe ukuba iimvakalelo ezidlulileyo sele zilibalekile, zama ukuzivuselela ngeefoto, iziqholo, umculo. Ngokomzekelo, ukhumbula indlela odibana ngayo nomyeni wakho kunye nantoni na ekuziphatheni kwakhe, ukubonakala kwakhe, ukuziphatha kwakho kukugxotha ekudeni komphefumlo wakhe? Yaye yintoni eyancoma yona ngosuku? Yiyiphi ingoma othanda ukuyidansa? Ukuba ukhangela kwimemori, unokufumana ezininzi zezixhobo ezingabuyisela ukutshabalalisa kwiintliziyo. Nengqungquthela yeziqhumiso, owazisetyenziswa ngexesha lokutyelela kwakho, unokukhumbuza umthandayo wothando oludlulileyo.
Hlela umdlalo wesimangalo esithandanayo kwiindawo zokutyela ozithandayo, uzinikezele kwiimbongo ezinxulumene nale ndawo, uze uzibale zonke iingxaki ngexesha elide. Mkhumbuze indoda yendoda ekhokelwayo phantsi kwesithsaba kwiminyaka emininzi edlulileyo. Kwaye nangona ukubonakala kwakho kushintshile kakhulu, iingubo ezimnandi kunye nokwenza kakuhle kuya kukunceda umthande wakho umthandayo.
Khumbula ukuba kuyimfuneko ukubuyisela ubunzima bokuqala beemvakalelo ezihamba ngesinyathelo, ngokuthe ngcembe. Kwaye ukutyunjwa omnye akuyiyo i-panacea. Zama ukuhlawula ingakumbi umyeni wakho, ukungaxabani kwaye ukhubekise, uthethe ngakumbi kwaye uxoxe ngeengxaki eziqhelekileyo imihla ngemihla. Ukuqaphela imizamo yakho, indoda endiyithandayo iya kukuxhasa kwaye ngokukhawuleza uza kufumana ilanga lesibini kunye!
Zithande kwaye ube yintando yakho kwaye uyifunayo
Kwaye ekugqibeleni songeza ingcinga ebalulekileyo: ukuba awuzithandi kwaye uzihlonele, ungalindelanga ukuba omnye umntu akuthande. Ngoko ke, ukuba ebomini bakho akukho mvakalelo ecocekileyo neyinyani, qalisa ngothando. Musa nje ukudibanisa uthando lokwenene kunye ne-egocentrism, ukuzingca kunye ne-narcissism. Ukuzithandana kukuvuma nokwamkelwa, ukuvisisana kwangaphakathi kunye nomoya wobunye.
Zikhuthaze ngezenzo ezilungileyo kunye nempumelelo ebalulekileyo. Funda ukufunda ngokugxeka iimpazamo zakho. Zama ukuzakhela kunye nokukhula ngokomoya. Fumana ixesha lokufunda ubuso obutsha buntu bakho. Kwaye ngokukhawuleza uza kubona ukuba ubomi bakho buguquka ngokubhetele, kwaye ezininzi iingxaki zihamba zize ziphele. Yiba nomusa kuwe nakwabanye. Hlonipha umzimba wakho kwaye unakekele. Qaphela izicwangciso zakho namaphupha. Funda ukuvumelanisa! Kwaye, njengomlenze, ngokuqinisekileyo uya kubhala ebomini bakho ulwazi lokuba njani uyintanda!
Indlela yokuba ngumfazi owonwabileyo, funda apha .
Indawo yowesifazane kwintsapho
Iimfihlakalo ezili-10 zobudlelwane obude kunye obugqibeleleyo
Njengamaxesha onke ukugcina isimo esihle
Thenga itekisi encinane yeTV ekhitshini
I-Potato casserole kunye nemifino
Inkukhu ehovini: zokupheka izitya ezithandekayo nezilula
Indlela yokuqaphela umdlavuza webele
Isaladi ye-celery kunye nama-apula
Indlela uBrown Spears alahlekelwa ngayo ubunzima ngeekhilo ezili-20: Inkqubo enqabileyo enokukunceda
Iingqimba zeShambhala - i-accessory ephezulu kakhulu kule nyaka
I-puree ehlaziyiweyo ukusuka kwi-gooseberry kunye ne-oranges